Maxay Somaliland MIDNIMO ku falaysaa? (Falanqayn dhinacyo badan taabanaysa) | Hadalsame Media
Home Maqaallada Maxay Somaliland MIDNIMO ku falaysaa? (Falanqayn dhinacyo badan taabanaysa)
Maxay Somaliland MIDNIMO ku falaysaa? (Falanqayn dhinacyo badan taabanaysa)
(Hadalsame) 15 Juun 2020 – Somaliland maxay ku faleysaa Midnimo? Waa isbarbardhig ku saabsan matalaadda Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Dowladda Somaliland.
Labada dhinac markii u horreysay ee ay is hor fariistaan waxay ahayd Jannaayo, 2012. Waxay ahayd Chevening House oo ah meel aan ka fogeyn magaalada London.
Waxay saaxiibbo ku yeelatay Saxaafadda Caalamiga ah iyo diblomaasiyiinta shisheeye. Xafiisyo u sameysan suuq geynta siyaasadda ayaa la kireystay.
Qof kastaa wuxuu ka qalin jebiyay Iskuulkaas furan ee ku saabsan wixii la soo maray iyo waxa hadda la hasto ee aan la heleen haddii Soomaaliya laga sii tirsanaado. Aqoontaas barashadeeda ma jirto meel ka caaggan. Waxaa lagu bartaa xafladaha, xafiisyada, goobaha ganacsiga, guryaha iyo saxaafadda bulshada, waxaana laga dhegeystaa Raadiyaha iyo TV-ga.
Federaalka – Soomaaliya waxaa u safta Madax ay ku jiraan qaar ku soo booday ama lagu soo dhex tuuray wafdi baxaya, xilka ay ku magacaaban yihiin awgiis ama si loo buuxiyo 4.5 beesha ay ka soo jeedaan darteed.
Qaar kalena, fursad looma siiyo in ay qeyb ka ahaadaan wadahadalka ama xataa ay daaha gadaashiisa ka talo bixiyaan.
Soo jeedin – Waxaan qabaa in Koofurta laga furo dood Dadweyne oo qoto dheer oo ujeeddadeedu ay tahay in ay sahasho is faham.
Previous article”Waxaannu diyaar u nahay in aan gacan ka gaysanno guusha shirka” – MW Somaliland oo rejo muujiyey (Daawo)
Next articleSHIRKA JABUUTI: Guddiyada la xulay oo durba guda galay 6 QODOB oo XASAASI ah (Fadlan akhri)